Wararka Maanta: Sabti, Apr 6 , 2013-Xukuumadda Britain oo Muwaadiniinteeda uga Digtay inay Safarro ku Tagaan Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
Warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Bartian ayay ku sheegtay in Al-shabaab iyo kooxo kale oo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya laga yaabo inay weerarro argagaxiso ka fuliso magaalada Muqdisho iyo deegaannada ku dhow-dhow.
Isla warbixinta ayaa lagu sheegay in weerarka argagaxiso ee la qorsheynayo in laga fuliyo Muqdisho uu marayo heer gabo-gabo ah, iyadoo uga digtay muwaadiniinteeda inaysan u safin Muqdisho.
Xukuumadda Britain ayaa sheegtay in weerarradan ay dhici karo in lala beegsado, maqaayadaha, hoteellada, goobaha ay dadku isugu yimaadaan, xarumaha dowaldda iyo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha.
“Waxaan ku tali-naynaa inaan loo safari Soomaaliya. Taladeennu waxay caddeyn u tahay in weli ay ka jiraan gudaha Soomaaliya falal argagaxiso, waxaana jirta inuu heer gabo-gabo ah marayo qorsha weerar ee la doonayo in Muqdisho laga fuliyo," ayuu yiri afhayeen u hadlay xafiiska barwaaqo sooranka Britain.
Isagoo intaas raaciyay: “Nabadgalyada dadka u dhashay Britain ayaa ah mid aad muhiin inoogu ah xafiiskuna uu aad uga ka walaacsan yahay. Waxaana warbixintan u soo saarnay in dadkeennu ay dhibaatooyinkooda uga nabad-galaan.”
Xafiiska barwaaqo sooranka Britani ayaa sheegay in xaaladda nabadgalyo ee Muqdisho ay aad u soo kordhayay tan iyo markii Al-shabaab ay isaga baxday Muqdisho dhammaadkii 2011, balse ay weli jiraan fallaka argagaxiso ee ay ka fulinayso Al-shabaab gudaha Magaaladaas.
Bishii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen in ka badan 10-qof oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, kaas oo lagu weeraray taliyaha hay’adda nabadsugidda gobolka Banaadir.
Digniintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladda Britain ay horay uga digtay in muwaadiniinteedu ay u safnaa Somailand, iyadoo sheegtay in ay kusoo wajahan yihiin falal argagaxiso, inkastoo aysan weli waxba ka dhicin.
Xukuumadda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin digniinta dowladda Britain ay ku sheegtay inay Muqdisho ka dhici karaan falal argagaxiso oo laga yaabo inay fuliyaan Al-shabaab iyo kooxo dowladda Soomaaliya kasoo horjeeda.